China mvura kunyudza kudzikisira fekitori uye vagadziri | Dingtaisheng
Yunifomu kuyerera kwemvura kugovera:
Nekuchinja nzira yekuyerera kwemvura mune yekudzosera ngarava, yunifomu kuyerera kwemvura kunowanikwa pane chero chinzvimbo munzira yakatwasuka uye yakatwasuka. Iyo yakanaka sisitimu yekuparadzira mvura kusvika pakati peye yega chigadzirwa tireyi kuwana yunifomu sterilization isina akafa magumo.
High tembiricha pfupi nguva kurapwa:
High tembiricha ipfupi nguva sterilization inogona kuitwa nekupisa mvura inopisa mune inopisa mvura tangi pamberi uye kudziyisa kubva pakakwirira tembiricha kusvika sterilize.
Inokodzera midziyo ine zvirema zviri nyore:
Nekuti mvura ine buoyancy, inogona kuumba yakanaka kwazvo inodzivirira pamudziyo pasi pekupisa kwakanyanya mamiriro.
Inokodzera kubata hombe kurongedza chikafu chemumagaba:
Izvo zvakaoma kupisa uye sterilize iyo yepakati chikamu cheakakura makedheni echikafu munguva pfupi nekushandisa yakamira mira, kunyanya kune chikafu chine yakakwira viscosity.
Nekutenderera, iyo yakakwira viscosity chikafu inogona kunge yakaenzana kupisa pakati nepakati munguva pfupi, uye kuwana inoshanda sterilization maitiro. Iko kunaya kwemvura patembiricha yakakwira zvakare kunoita basa mukudzivirira chigadzirwa kurongedza panguva yekutenderera.
Takura dengu rizere rakazara muRedort, vhara musuwo. Musuwo wekudzosera wakakiiwa kuburikidza nekatatu kuchengetedzwa kwakabatana kuti uve nechokwadi chekuchengetedza. Musuwo wakakiiwa zvinehunyanzvi muchiitiko chose.
Iyo sterilization maitiro anoitwa otomatiki zvinoenderana neresipi yeiyo yekuisa micro yekugadzirisa controller PLC.
Pakutanga, iyo yepamusoro-tembiricha mvura kubva mutangi yemvura inopisa inojowa mumudziyo wekudzorera. Mushure mekudziya kwemvura inopisa nechakagadzirwa, chinotenderera zvinowanda kuburikidza nepombi yemvura inoyerera uye pombi yekugovera mvura yesainzi. Mhepo inobayiwa jekiseni nemusanganiswa wemvura kuti chigadzirwa chienderere mberi kudziya uye kutapudza.
Iyo inoyerera inoyerera inochinja mudziyo we retort mudziyo unowana yunifomu kuyerera pane chero chinzvimbo mune yakatwasuka uye yakatwasuka nzira nekuchinja kuyerera nzira mumudziyo, kuti uwane yakanakisa kupisa kupisa.
Mukuita kwese, kumanikidza mukati memudziyo wekudzosera kunotongwa nechirongwa chekubaya kana kuburitsa mweya kuburikidza nemavharuvhu anoenda kumudziyo. Sezvo kunyudzwa kwemvura kuri mukati, kumanikidza mukati memudziyo hakukanganisike netembiricha, uye kumanikidzwa kunogona kumisikidzwa zvinoenderana neakasiyana mapakeji ezvigadzirwa zvakasiyana, zvichiita kuti sisitimu inyanyo shanda piece 3 chidimbu chinogona, chidimbu chechipiri chinogona, mapakeji anoshanduka, mapakeji epurasitiki nezvimwe. ）.
Padanho rekutonhora, kupora kwemvura inopisa uye kutsiva kunogona kusarudzwa kuti kudzore sterilized inopisa mvura kune inopisa mvura tangi, nokudaro ichichengetedza kupisa simba.
Kana maitiro apera, chiratidzo chealam chinopihwa. Vhura musuwo uturure, wobva wagadzirira iyo inotevera batch.
Kufanana kwekuparadzirwa kwekushisa mumudziyo i ± 0.5 ℃, uye kumanikidza kunodzorwa pa0.05 Bar.
Bhodhoro repurasitiki mbiya / mukombe
Yakakura saizi inoshanduka mapakeji Putira casing kurongedza
Dairy: Tin gaba, bhodhoro repurasitiki, mbiya / mukombe, girazi bhodhoro / chirongo, inochinjika homwe kurongedza
Zvichienderana kuputira nyama, huku, sausages
Yakakura saizi inoshanduka kurongedza hove, hove
Yakakura saizi inoshanduka kurongedza yakagadzirira kudya chikafu
Pashure: Mativi akapfapfaidza kudzokorora
Zvadaro: Kutungamira Steam Kudzokorora
Otomatiki Mvura Kunyudza Retort
Stainless Simbi Mvura Kunyudza Kudzikisira
Kunyudza Mvura Kudzora Sterilizer
Inoenderera hydrostatic sterilizer system